Dadaalo lagu xalinayo colaadii Taagare oo socda
May 22, 2020 Farah Abdikadir Mohamed 3
GAROWE(P-TIMES)- Wararka ka imaanaya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa sheegaya in maanta lagu wado in deegaanka Taagare ee galbeedka magaalada Gaalkacyo oo uu ka dhacay marar kala duwan dagaal in uu ka furmo shir weyne u dhaxeeya madax ka kala socota dhinacyada Puntland iyo Galmudug, kuwaas oo diirada saaraya xalinta colaadii ka dhacday deegaankaasi.
Masuuliyiin iyo waxgaradka ka kala socda labada dhinac ayaa ka qayb galaya dhamaystirka heshiis nabadeed oo lagu xalinayo colaadii ka dhacday deegaankaasi oo marar kala duwan soo laab laabatay.
Maalmo ka hor ayaa xabad joojin waxaa la kala dhex dhigay labada maleeshiyo beeleed ee ku dagaalamay deegaanka Taagare oo dhacad uleedka magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
Shirkan ayaa la filayaa inta uu socdo in laga soo saaro qodobo muhiim ah, kuwaas oo xal rasmi ah looga gaarayo colaad beeleedyada soo laab laabtay, muwaas oo sababay khasaarayaal isugu jira dhimasho, dhaawac ah iyo barakac dad weyne.
Xaalada deegaanka Taagare ayaa degan maalmihii ugu dambeeyey, waxaana malayshiyaad hubaysan oo kasoo jeeda dhinaca Galmudug ay weerareen dad shacab ah iyo saldhig ciidamada Puntland ay ku leeyihiin deegaanka halka dagaalkaasi uu sababay dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray labada dhinac balse waxgaradka gobolka ayaa dadaalo ku bixinaya hada in dagaal dambe uusan dhicin.
Muxuu yahay xalka laga gaarayo qof doonayo in uu dhulkaaga xoog iyo boob ku qaato. Xalka wuxuu ku jiraa in la iska dhiciyo oo xabad lagala daalo. Waa in sida ay wax u xasuuqayaan si daran loo xasuuqaa.
Waa in loola dhaqmaa si ka daran sida u dhaqmaan hal qof markeey dilaan waa in toban qof laga dilaa. This is the best solution laakiinse haddii la barbaryo waa sideey rabeen.
Reerkaan sacad Ilaah ma yaqaanaan luqadda ay fahmayaa waa tareesada weliba waa in waddooyinka loo galaa sidooda oo kale oo cidnan aan loo aabayeelin.
Puntland shacabkeeda Kyi madaxdeeda waxay caan ku noqdeen hogaan jilcsan iyo hormood dabacsan oo ay horay loogu aqoon
Cadowgu ishaaduu fiiriyaa ushaaduu fiiriyaa muddo dheer halyeeyadeenna Kyi hormoodkeenna waa la dilaayey macho ma keenayso hishiis lkb waa in xaqiiqda loo dhaco yaa dhibka wada nin ku dilaaya haddana heshiis wataa ma jiro cabsida waa shirki iskalla ka fogaasho waa in ilaah la aamino cadowgana layska celiyo
salaam: kooxda baraxley waa in loo sheego in galbeedka mudug uusan dhulkooda ahayn lakin wa aa ka daqsan karaan ayogo dhowraya shaucda dowladda PL. waa nasib darro in taas lagu oran waayey. Kooxda baraxley wey ogyihiin i uusan dhulaasu ahayn dhulkooda.
ninka goobta lagu kulmay ka hadley oo yirid dhulku dadka waa ka badanyahay wuu u gafay daka dhulka iska leh. Bal fiirsha goobta lay isugu yimid reer baraxley wa ay la yaabsan yihiin dhulkaan sababto ah waligood ma aysan arkin dhulkaan. Dhabancad khalad bay aheyd in uu dakaas geeyo dhulkaas ee waxaa la rabay i uu ku yiraahdo dadkina xakameeya oo joojiya maatada aad malinkasta ugu dhuumanaysan jidadka.